About us - Quanzhou Jinjia Imishini Co., Ltd.
Quanzhou Jinjia Imishini Co., Ltd.
I-Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd iyinkampani yokuhweba, eyakwaQuanzhou Hongda Machinery Co., Ltd.
I-HONGDA isungulwe ngo-1990, etholakala eQuanzhou, idolobha elidumile laseChina laphesheya kwezilwandle, elinomlando omude, umnotho ochumayo nemvelo enhle. I-Fujian jinjia Machiery Co., Ltd iyinkampani ephethwe yiHongda. Le nkampani yasungulwa ngonyaka we-1990, ngemuva kweminyaka eyishumi yemizamo, manje seliyibhizinisi elihola phambili lesilinganiso esikhulu kumishini yobunjiniyela enezingxenye ezahlukahlukene zezingxenye ezithwala izimpahla ku-track roller, othwala. i-roller, i-sprocket, idler kanye namaketanga wethrekhi nezicathulo zethrekhi nedumela elihle.
Ikhwalithi enhle yisiko elidala lenkampani yethu .Kulokhu kuyinqubomgomo yethu yokusebenza kanye necebo 'lokwenza okuhle ngokuphelele nokufeza ukwaneliseka okungu-100%'. Ngakho-ke kwethulwe imishini esezingeni eliphezulu, kwaqashwa amathalente amahle kakhulu futhi abasebenzi baqeqeshwa njalo ngekhwalithi. Zonke lezi ziqinisekisa ikhwalithi enhle yemikhiqizo yethu futhi ziletha idumela eliphakeme phakathi kwamakhasimende ethu, okunikeza isisekelo esiqinile sokubambisana kwethu.
Ukugcizelelwa okukhulu kubuye kwaxhunyaniswa nokuthengiswa kanye nesevisi yokuthengisa ngemuva, Inethiwekhi ephelele yokuthengisa nensizakalo isethwe emakethe yendawo nase EJapan, Korea, EU.SA, ECanada, EU, ENingizimu-mpumalanga ye-Asia kanye neMiddler Asian amazwe ukuhlinzeka ngenkonzo elula, esheshayo nephelele yamakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe.
Sizokwenza, njengoba besihlala senza, senze yonke imizamo ukwanelisa izidingo zakho.